Antonio Rudiger oo go’aansaday inuusan heshiiska u kordhin kooxdiisa Chelsea… (Sababta burburka wada-xaajoodka & Labo naadi oo isku garbinaya saxiixiisa) – Gool FM
Haaruun September 26, 2021
(London) 26 Sebt 2021. Difaaca kooxda Chelsea ee Antonio Rudiger ayaa doortay inuu isaga hayaamo Stamford Bridge marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan isagoo aanan heshiiska u kordhin doonin naadigiisa.
Qandaraaska xiddigan ayaa dhacaya marka uu dhammaado kal ciyaareedkan isagoo bilaash ugu dhaqaaqi kara kooxaha doonaya oo ay ku jiraan Bayern Munich iyo Real Madrid.
Wargeyska MARCA ayaa baahiyay inuu Rudiger ka helay Chelsea yabooh heshiis kordhineed oo mushahar ahaan sanadkii ku qaadanayo 6.5 milyan oo euro halka isaguna uu ku adkeystay inuu sanadkii helo mushahar gaaraya 10 milyan oo euro, arrintaas ayaana saldhig u ahayd inuu istaago wada-xaajoodka heshiis kordhinta ee u dhexeeyay labada dhinac.
Waxaa wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in 28-sano jirka Jarmalka ah wakiilkiisa uu diyaarinayo xalinta mustaqbalka laacibkan iyo inuu u dhaqaajiyo koox kale isagoo xiiso ka helaya kooxaha Bayern iyo Madrid oo doonaya Rudiger.
Difaacan dhexe ayaa Chelsea uga soo biiray naadiga AS Roma sanadkii 2018 isagoona xubin muhiim ah ka ahaa safkeeda waayihiisa Galbeedka London gaar ahaan tan iyo imaatinkii Macallin Thomas Tuchel.
Xiddigii hore ee Arsenal iyo Man City, Samir Nasri oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubadda cagta